November 2017 | အ င်္လ ကာ ည
How to be successful in life :13 Tips
6:43 AM | Labels: ဆောင်းပါး
ကျနော်တို့အားလုံး လိုအပ်တဲ့အောင်မြင်မှု တစ်စုံတစ်ခုကို မျှော်လင့်နေရတာပါပဲ။
အောင်မြင်တဲ့ လူတိုင်းရဲ့ နည်းလမ်းဖွင့်ဆိုချက်တွေက ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်။
အာဏာ... ဆိုပြီး ဖွင့်ဆိုယူဆကြပါတယ်။
ကျနော်တို့အားလုံး အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို လိုချင်ကြတာပါပဲ
ဒါမှ စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ နေနိုင်မှာကို.....
ငွေကြေးကိစ္စ အပူအပန်မရှိပဲ ငွေကိုရေလို သုံးချင်တယ်
အကောင်းစား ကားလည်း စီးချင်တယ်
အိမ်လှလှလေးနဲ့ နေထိုင်ဖို့ကိုလည်း စိတ်ကူးပုံဖော်မိကြမှာပါ။
သို့သော်လည်း ဒီလိုနေနိုင်ဖို့ ဒီလိုအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့တော့ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့
ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ အောင်မြင်ရေးနည်းလမ်း(၁၃) အချက်တွေက ဘဝမှာ အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်း တွေကို ဖော်ဆောင်ပြမလဲဆိုတာ တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက် လေ့လာဖတ်ရှုကြည့်ရအောင်ဗျာ
1. ယုံကြည်မှုကို ကြီးကြီး စဉ်းစား စိတ်ကူးပုံဖော်ဖို့ပါ
သင်တို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေ ဘယ်တော့မှ လုပ်လို့မရနိုင်ဘူး /ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်အတွေးတွေက သင်ကို့ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ် တစ်ခုပါ။
ဒါတွေကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါ။ သင်စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်၊ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကို အမြဲ ပုံဖော်စဉ်းစားပေးနေဖို့ပါပဲ။
2. မိမိ ဘာကို စိတ်ဝင်စားလဲ အချက်ကိုရှာဖွေပါ၊ ပြီးလျှင် လုပ်ဆောင်ပါ။
သင်တို့ နှစ်သက်တဲ့ အရာတွေကို ရှာဖွေပြီး လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလျှင် သင်တို့ဟာ အောင်မြင်ရေးကိုပန်းတိုင်ကိုသွားနေတဲ့ ပြေးလမ်းပေါ်ကလူတစ်ယောက်ဆိုတာ သင်တို့ သိလာမှာပါ။
ဒီအတွက် သင်လည်း ဘာမှမလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဘာတစ်ခုမှ သင့်ဘဝမှာ ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
3. ဘဝမှာ ဟန်ချက်ညီနေထိုင်နိုင်အောင် လေ့လာသင်ယူပါ
သင့်မြတ်မှုနဲ့ ပရမ်းပတာမသင့်မြတ်မှု ဖြစ်စဉ်တွေကြားမှာ မပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေဦးမှာပါ။ ဒီလိုကွဲပြားမှုဖြစ်စဉ်တွေကြားထဲက လူတိုင်း အာဏာရခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်သလို သြဇာလွှမ်းမိုးတဲ့ လူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်လာနိုင်တာပါပဲ။
သင့် အတွက်လည်း ဒီလိုလူတွေကြားထဲမှာ အောင်မြင်ရေး သော့ချက်ကိုရဖို့ ဘယ်လိုရှေဆက်လျောက်လှမ်းဖို့ကို လေ့လာသင်ယူဖို့ ရမှာပါ။
4. ကျရှုံးမှုကို မကြောက်ပါနဲ့။
ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာ နောက်တစ်ချိန်ပြန်စဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ အမှားအယွင်းမရှိ အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အကင်းပါးရမယ်။
5. အောင်မြင်မှုကိုရဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ခိုင်မာရမယ်
တစ်ခါတစ်ခါ ဆုံးချက်တွေနှောင့်နှေးမှုတွေကြောင့် ဘဝမှာကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ လွဲချော်တတ်ကြတယ်။ အောင်မြင်မှုကိုရဖို့အတွက် သင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိနေရပါမယ်။
6. အသုံးကြတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။
သင့်မှာ တစ်ခြားသူတွေလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်ဖို့ အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပြဖို့ပါ။ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေက သင့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ချက်တွေကို လိုချင်အားကျလောက်အောင် ထူးချွန်စွာပြုမူ လုပ်ဆောင်ပြပါ။
သင်က ပုံမှန်သူတွေထက်ပိုတယ်ဆိုရင်တော့ သင် လုပ်နိုင်တာထက် လုပ်ဆောင်ပြနိုင်မှာပါ။
လူတွေကြားမှာ ရှင်သန်လုပ်ကိုုင် နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အောင်မြင်ရေးလမ်းစတစ်ခုက သဘောထားကွဲလွဲမှု မဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ပါ။ ဒီအတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိအောင် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
8. စိတ်ကူးအသစ်တွေ ဖော်ဆောင်ပြဖို့ မကြောက်မရွံပါနှင့်။
မိမိတွေးလိုက်တဲ့ စိတ်ကူးအတွေးတွေက တစ်ခြားသူတွေအတွက် မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ကြောင်စီစီနိုင်ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တယ်/အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီစိတ်ကူးအတွေးတွေကို လူတွေကိုချပြဖို့ ရှင်းပြဖို့ ပြောပြဖို့ အတွက် မကြောက်ရွံ့ပါနဲ့။
9. အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ယုံကြည်မှုရှိပါစေ။
သင့် အိမ်မက်ထဲက လိုချင်တဲ့အရာရှိရင် သင် ဒါကိုရအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုလျှင် ရအောင်လုပ်ဆောင်ပြလိုက်ပါ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ငါလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို မွေးယူပါ။
10. ကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ် ထားရှိပါ။
အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကိုရဖို့ ယုံကြည်ပြီး ပျော်ရွင်နိုင်တာတွေကို စဉ်းစားမလား
ပတ်ဝန်းကျင်က ပြသနာတွေ-စိတ်ဆင်းရဲတာတွေကို စဉ်းစားမလား
ကောင်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ရင် ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်
ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိရင် ကောင်းတဲ့အပြုအမူဖြစ်လာမှာပါ။
11. စိတ်ပျက်အားလျော့မှုကို လက်မြှောက်အရှုံးမပေးပါနဲ့။
မိမိကိုယ်ကို စိတ်ပျက်အားလျော့မှု ခံစားချက်တွေကို မဖြစ်စေပါနဲ့။
သင်သာ ဒီလို စိတ်ပျက်အားလျော့ အရှုံးပေးမှုတွေ ရှိမနေဘူးဆိုရင် အောင်မြင်မှုဆိုတာ သင့်ရဲ့ အနီးဆုံးမှာဆိုတာ ကျိန်းသေပါတယ်။
သင် လုပ်ပြနိုင်တာထက် ပိုလုပ်ဆောင်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင် ပိုမြင့်မားတဲ့ ရာထူးနေရာကို ရောက်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတွက် အလုပ်ကို စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ပြရမှာက သင့်ရဲ့တာဝန်ပါ။
13. စိတ်လိုအင်ဆန္ဒကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ သတ္တိရှိပါစေ။
တစ်ခါတစ်ခါ စွန့်စားမှုမရှိလို့ သင် လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်မလာနိုင်တာတွေရှိတယ်။။
သင့် ရဲ့ စိတ်နှလုံးသားထဲက ဒါကိုလုပ်ကိုလုပ်မယ် ရကိုရရမယ်လို့ လုံလောက်တဲ့ သတ္တိအားမွေးမယ်ဆိုရင် သင့် လိုချင်တာတွေအမှန်တကယ်ရလာမှာပါ။
Kara Heissman ရဲ့
How To Be Successful In Life: 13 Tips From The World’s Most Successful People ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်သည်
6:40 AM | Labels: ဆောင်းပါး
Monday Blues ဆိုတာကြီးကို စတင်ခံစားရတော့မယ်ဗျာ၊
(Monday Blues ဆိုတာ--- တနင်္ဂလာနေ့တွင် အလုပ်တတ်ရန်စိုးရိမ်ခံစားနေရခြင်း၊ စိတ်အားတတ်ကြွမှုပျောက်ဆုံးနေခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့လာရမည့် တစ်ပါတ်တာအလုပ်တာဝန်များအတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်)။
အလုပ်မှာ ဒီနေ့ စဉ် Repetitive jobs တွေကိုလုပ်နေရင်း တစ်ခါတစ်ခါ ငြီးငွေ့လာသလို့ ခံစားရတယ်
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသိကြပဲ အလုပ်ထဲရောက်မှသိကြ
အတင်းပြောကြ ၊ ဖိနှိပ်ကြ၊ မနာလိုတာ ၊ ချောက်တွန်းတာတွေ၊ နေရာယူတာတွေ၊ အပေါ်ဖား အောက်ဖိ လူတွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့ ကျနော်တို့တွေ ကြုံနေရကြတာပဲ
ဒီလို စားဝတ်နေရေးအတွက် ပိုက်ဆံရဖို့အလုပ် လုပ်နေရတော့ သူတို့ပြောတာ မခံချင်လည်း ခံ၊
မမှန်လည်းဟုတ် မှန်လည်းဟုတ်နေရမယ်၊ လူတိုင်းမာနလေးရှိတော့ အပြောမခံနိုင်ရင် အလုပ်ထွက် ဆိုရင်လည်း စားဝတ်နေရေးက တစ်ဦးတည်းဆိုရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်၊ မိသားစုနဲ့သာဆိုရင် လွယ်မှာဟုတ်ဘူး၊ ဒီတော့ ကြိတ်မှိတ်လုပ်ကြရင်း အချိန်တန်ရင် လစာလေးထုတ်၊ဒီလစာလေးရဖို့ ဝတ်ကျေတန်းကျေပဲ လုပ်ကြတော့တာပေါ့ ။
လုပ်သက်သာကြာလာတယ် လစာမတိုး နောက်အလုပ်တစ်ခုပြောင်းလုပ် ၊
ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် အလုပ်သစ်မှာ အလားတူမျိုး ပြန်ကြုံလာရင်း ဘာမှထူးခြားမလာဘဲ
အသက်တွေသာ ကြီးလာကြပြီး ဘဝအတွက် နေမြဲတိုင်းကနေမြဲတမ်း ပေါ့ဗျာ
ကျနော် တို့ ဘာအတွက် အလုပ် လုပ်နေရတာလဲ???
စားဝတ်နေရေးအတွက် ပိုက်ဆံရဖို့ ဝတ်ကျေတန်းကျေ အလုပ် အလုပ်နေကြတော့မှာလား
ကျနော်အနေနဲ့တော့ ပိုက်ဆံရဖို့တစ်ခုတည်းအတွက် အလုပ်မလုပ်စေချင်ဘူး
ကျနော်တို့ သင်ယူလာခဲ့တဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာနဲ့ လုပ်အားကိုပေါင်းပြီး လစာဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံကို ကုမ္ပဏီက ပြန်ရကြတာပါ။ကျနော်တို့ဒီတိုင်းနေရင် ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစိနေမှာပါ၊ ကျနော်တို့ဘဝတိုးတက်မှုအတွက် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲကြည့်ရအောင်.....
1. ကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အလုပ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို ထပ်မံလေ့လာသင်ယူပါ Upgrade လုပ်ပါ၊
ပိုက်ဆံကုန်မှာပဲ၊ အချိန်မရှိလို့၊ အဝေးရောက်နေလို့ဆိုပြီး ဆင်ခြေတွေပေးနေရင် ကိုယ်အတွက်တိုးတက်မှုတွေက တစ်ခြားသူတွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ဆုတ်လျော့လာပါလိမ့်မယ်၊ ဒီအတွက် နေ့စဉ်နည်းနည်းစီ လေ့လာသင်ယူပါ၊
2. အလုပ်ကို စိတ်ဝင်တစားလုပ်ပါ။
မိမိအလုပ်ကို စိတ်ဝင်တစားအလုပ် လုပ်မှ အလုပ်က တိုးတက်လာမှာပါ၊ လစာတိုးလာမယ်၊ ရာထူးတိုးလာမယ် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေက သင့်အတွက် အမြဲ ဖြစ်နေတော့မှာပါ၊ ဒီအတွက် မခိုမကပ်ပါနဲ့၊ ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် ထုတ်ဖော်လုပ်ဆောင်ပြလိုက်ပါ၊
3. မိတ်ဆွေများများထားပြီး မတူတာတွေကို လေ့လာသင်ယူပါ။
မိတ်ဆွေတွေက သင့်ကိုကူညီနိုင်သလို သင့်ကိုလည်း ဖျက်စီးပစ်နိုင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေများချင်းက သင့်အလုပ်အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ၊ ဒီအတွက် အလုပ်ပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ၊ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကို လေ့လာသင်ယူပါ၊
4. လစာအပြင် အပိုထပ်ရနိုင်မယ့် စီးပွားရေးနည်းလမ်းတွေကို အမြဲရှာဖွေပါ၊
ကိုယ်ဘာတတ်ကျွမ်းသလဲ ဘယ်အပိုင်းမှာအားသာချက်ရှိလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် စမ်းစစ်ပါ။
(ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက ကျနော်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ် ဒီတော့ အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာ အိမ်တွေလိုက်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောလိုက်သင်ပြီး ဝင်ငွေအပိုရှာတယ် ၊ ပြီးတော့ တစ်ပါတ်(၃)ရက် စာမူတွေကို ဘာသာပြန်တယ်၊) ဒီအတွက် ကိုယ်က ဝင်ငွေအပိုရနိုင်မည့် နည်းလမ်းတွေကို အပြင် မိတ်ဆွေတွေဆီကဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပဲ စူးစမ်းလေ့လာပြီးအခွင့်အလမ်းတွေကို ဖန်တီးရယူပါ။
5. ကိုယ်တတ်စွမ်းနိုင်သလောက် သူတစ်ပါးကို ကူညီပေးပါ ။
လူတစ်ယောက်က အကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင် ဒီလူဆီက ဘာပြန်ရမလဲဆိုပြီး မတွေးပါနဲ့။ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ စိတ်ရှင်းရှင်းထားပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးလိုက်ပါ ၊
ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့အကူညီ က တစ်ချိန်မှာ သင့်အတွက် အကျိုးရှိစေမှာပါ။ ဒီအတွက် အကူအညီဆိုတာ အသွားအပြန်ရှိတဲ့အတွက် ကူညီပေးလိုက်ပါ။
ဒီအချက်တွေက ပိုက်ဆံရဖို့တစ်ခုတည်းအတွက် အလုပ် လုပ်နေတော့တာမဟုတ်သလို
အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုပြီးဆုံးသွားရင်တော့ ကျနော်တို့ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ ဒီကြိုးစားမှုရလဒ်တွေက ကျနော်တို့ဘဝရှေ့ရေးအတွက် အရာထင်လာမှာပါ၊